Semalt Expert: Ahoana ny fanodinana Spam fanodikana izay manimba ny antontam-baovao momba anao
Indraindray, ny tranonkalanao dia mety hahazo fifamoivoizana. Amin'ity tranga ity, ity trosa ity dia mety miteraka fiantraikany ratsy amin'ny angona fanadihadiana. Ny webmaster rehetra dia mandefa ny antontan-taratasim-pitsarana marina sy marina ho an'ny tanjona ara-barotra e-commerce - metal spot faretti da. Ireo spam-botsika sy loharanom-baovao hafa manome tsipika fanovàna dia mety ahitana fanazavana maro momba ny angona spam. Amin'ity tranga ity dia afaka mahazo fampahalalana diso momba ny fivoaran'ny sehatry ny e-commerce ny mpampiasa. Mba hialana amin'ny fifamoivoizana miafina avy amin'ny angon-drakitrao dia mety mila mianatra ny fomba hanakanana spam referendum amin'ny data Analytics ianao.
Ity lahatsoratra ity dia manome tetika maromaro izay afaka manampy anao hamerina amin'ny laoniny ny fifamoivoizana i Jack Miller, mpiasa matihanina amin'ny 10 Semalt Digital Services: 8)
Fanamafisana ny fifamoivoizana sandoka
Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny fifamoivoizana sandoka dia avy amin'ny sehatra izay manandrana hanafina ny mpampiantrano. Ny fifamoivoizana sandoka dia mety hipoitra avy amin'ny pejy finday (pejy 11). Ireo sampan-draharahan'ny SEO izay manome vahaolana haingana amin'ny vidiny mora dia manana taka-bidy amin'ny ankamaroan'ireo loharanom-baovaon-drôna. Ireo mpampahalala botne lehibe dia ahitana mpampiantrano maro mitondra famandrihana pejy an-tserasera ao amin'ny tranonkalanao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ity vaovao ity dia manelingelina ny fomba itondran'ny olona maro an'ity tranonkala ity. Ny fampiasana ireo mpamatsy mailaka tsy azo antoka dia mampitombo ny mety hisian'ny karazana fifamoivoizana.
Ny mpiserasera amin'ny aterineto dia afaka mahazo ny ID ny fanananao Google Analytics..Amin'ny fampiasana ny ID misy anao, dia mety hampitombo na hampihenana ny môtika rehetra izy raha toa ka fantany ny anton'ireo Google Analytics naverin'izy ireo. Ny dikan-teny rehetra an'ny Google Analytics dia mety amin'ny fitsidihana tranonkala toy izao. Amin'ny tranga hafa, ny mpizara mailaka sasany dia miezaka mamantatra mailaka avy amin'ny sehatra spam. Zava-dehibe ny mampiasa mpampiasa mailaka azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny sehatra.
Ahoana no hanakanana ny tranonkala fanamarinana
Azonao atao ny manakana ny dom-spam-ny amin'ny alàlan'ny tahadika .htaccess eo amin'ny sehatry ny faritra misy anao. Ireo mpampiasa mampiasa mpampiasa Apache dia manana safidy amin'ny fampiasana marika maromaro ao amin'ny tranonkalany. Zava-dehibe ny mikarakara rehefa manomboka ireny rafitra ireny ao amin'ny tranonkalanao. Ny sasany amin'ireto code ireto dia manana ny mety hisintonana ny tranonkala manontolo amin'ny server. Ankoatr'izany dia mety hitarika ho amin'ny loza mety hitranga amin'ny spam-referans izy ireo.
Azonao ampiasaina koa ny filaharan'ireo spam Google Analytics. Ny ankamaroan'ny webmasters dia manana kaonty Google Analytics mba hanampy azy ireo amin'ny adidin'ny tranonkala analytics. Ao amin'ny tabilao admin, azonao atao ny manakana ny fifamoivoizana avy amin'ny sehatra iray manokana amin'ny safidinao. Azonao atao ny mametraka filtre ny safidinao. Ireo sivana ireo dia afaka manakana ny fitohanan'ny fifamoivoizana avy amin'ny saha misy spam. Azonao atao ihany koa ny manosika fifamoivoizana amin'ny adiresy IP. Ny fampiasana cookies sy ny lafiny hafa dia afaka manatsara ny filaminana ao amin'ny tranonkalanao.
Ny adihevitra momba ny tsiambaratelo dia mety ho asa sarotra manoloana ny hetsika e-commerce maro. Ohatra, ireo olona miasa amin'ny tranokala e-commerce dia mety hihaona amin'ny spam maro sy ireo orinasa samihafa hafa. Ny fianarana hanakana ny fifamoivoizana dia mety ho sarotra. Ity toro-lalana ity dia afaka manampy anao amin'ny toro-hevitra mikasika ny fomba hisorohana ny fitsangatsanganana ara-panatanjahantena amin'ny fanelingelenana ny fampahalalana ao amin'ny tranonkala. Ankoatra izany, azonao atao ny manofa botsaka tsy hanao fitsidihana amin'ny Internet amin'ny sehatra misy anao.